Taa na akụkọ ihe mere eme: 7 August 1903 Thessaloniki-Monastery Railway - RailNews
HomeGeneralTaa na History: 7 August 1903 Thessaloniki-Monastery Railway
07 / 08 / 2019 Levent Elmastaş General, Turkey, Taa na akụkọ ihe mere eme 0
Railway nke ebe obibi ndị mọnk na Tesalonaiki
7 August 1903 Thessaloniki-Monastery Railway Nọrọ na 169,5 kilomita, ndị na-agba bọlbụ Bulgarian gbara ndị Bekee ọkụ, e gbutusịkwara eriri igwegraph.
Taa na History: 19 January 1891 Thessaloniki-Monastery Ottoman Railway Company nakweere Bylaws ... 19 / 01 / 2013 Taa na akụkọ ihe mere eme nke 19 January 1884 Mersin-Adana nhazi usoro malitere na ememe ahụ. 19 January 1891 Ndị Tesalonaịka-Monastery malitere site na ịnakwere Iwu Ottoman Railway Company. Isi ụlọ ọrụ ahụ bụ 20 nde francs (880 puku Ottoman Lira) 19 January 2004 30 malitere ire tiketi kọmputa na ọrụ.
Na History Taa: 19 January 1891 Thessaloniki-Monastery Ottoman Railway Company Bylaw X 19 / 01 / 2015 Taa na akụkọ ihe mere eme nke 19 January 1884 Mersin-Adana nhazi usoro malitere na ememe ahụ. 19 January 1891 Ndị Tesalonaịka-Monastery malitere site na ịnakwere Iwu Ottoman Railway Company. Isi ụlọ ọrụ ahụ bụ 20 nde francs (880 puku Ottoman Lira) 19 January 2004 30 malitere ire tiketi kọmputa na ọrụ.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 19 January 1891 Thessaloniki-Monastery Ottoman Railway ... 19 / 01 / 2016 Taa na akụkọ ihe mere eme nke 19 January 1884 Mersin-Adana nhazi usoro malitere na ememe ahụ. 19 January 1891 Ndị Tesalonaịka-Monastery malitere site na ịnakwere Iwu Ottoman Railway Company. Isi ụlọ ọrụ ahụ bụ 20 nde francs (880 puku Ottoman Lira) 19 January 2004 30 malitere ire tiketi kọmputa na ọrụ.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 19 January 1891 Thessaloniki-Monastery Ottoman Railway ... 19 / 01 / 2017 Taa na akụkọ ihe mere eme nke 19 January 1884 Mersin-Adana nhazi usoro malitere na ememe ahụ. 19 January 1891 Ndị Tesalonaịka-Monastery malitere site na ịnakwere Iwu Ottoman Railway Company. Isi ụlọ ọrụ ahụ bụ 20 nde francs (880 puku Ottoman Lira) 19 January 2004 30 malitere ire tiketi kọmputa na ọrụ.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 19 January 1891 Thessaloniki-Monastery Ottoman Railway ... 19 / 01 / 2018 Taa na akụkọ ihe mere eme nke 19 January 1884 Mersin-Adana nhazi usoro malitere na ememe ahụ. 19 January 1891 Ndị Tesalonaịka-Monastery malitere site na ịnakwere Iwu Ottoman Railway Company. Isi ụlọ ọrụ ahụ bụ 20 nde francs (880 puku Ottoman Lira) 19 January 2004 30 malitere ire tiketi kọmputa na ọrụ.
Taa na History: 19 January 1891 Thessaloniki-Monastery Ottoman Railway Company nakweere Bylaws ...
Na History Taa: 19 January 1891 Thessaloniki-Monastery Ottoman Railway Company Bylaw X
Taa na akụkọ ihe mere eme: 19 January 1891 Thessaloniki-Monastery Ottoman Railway ...